वर्षा शिवाकोटी पछिल्लो समय आशालाग्दी नायिकाको सूचीमा पर्छिन्। ‘नाइँ नभन्नु ल– २’ र ‘पशुपति प्रसाद’ बाट दर्शकको नजरमा नोटिस भएकी उनी कम बोल्ने बानीका कारण इन्डस्ट्रीमा घमण्डी नायिकाको रूपमा चिनिन्छिन्। तर के वर्षा साँच्चिकै घमण्डी छिन् त ? नजिकबाट चिन्नेलाई मात्रै थाहा छ।
वर्षाको पछिल्लो फिल्म ‘वीर विक्रम २’ प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ। यही फिल्मको ‘पिरतीको मीठो तिर्सना’ बोलको रिमेक गीत चर्चित पनि भयो। तर उनको योभन्दा अगाडिका केही फिल्मले बजारमा खासै राम्रो प्रभाव जमाउन सकेनन्।
फिल्मको असफलतासँगै वर्षाको प्रभाव दर्शक माझ कम हुँदै जाँदा पछिल्लो समय उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर तहल्का नै मचाएकी थिइन्। फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ को प्रदर्शनताका कुनै पनि मिडियाले राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नगरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाटै भडास पोखिन्। फिल्म राम्रो हुँदाहुँदै पनि मिडियाले वास्ता नगरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याइन्।
साथै मिडियाले चलचित्रको नभई कलाकारको निजी जीवनसँग जोडेर मात्र अन्तर्वार्ता लिएकोमा उनको गुनासो थियो। भन्छिन्, ‘नायकनायिकाको निजी जीवनको मात्र किन चासो राखिन्छ ? किन फिल्म, फिल्म निर्देशक र अन्य चलचित्रकर्मीको कामको चर्चा हुँदैन ? ’
नेपाली फिल्मले बजेटको २५ प्रतिशत प्रचारप्रसारमा मात्र खर्च गर्छ। त्यसमाथि कलाकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टा, टिकटकबाट गर्ने प्रमोसनमा समेत त्यत्तिकै समय खर्चेका हुन्छन्। फिल्मको मुर्हूतदेखि टे«लर रिलिज र प्रदर्शन मितिसम्म निर्माता र मुख्य कलाकारको दौडधुप हेर्न लायक हुन्छ। तर जब शुक्रबार हलमा फिल्म प्रदर्शनमा आउँछ, पानी समेत भन्न नपाई फिल्मको लगानी चुर्लुम्म डुब्छ।
फिल्म डुब्नुमा निर्माता र निर्देशकभन्दा कलाकार बढी जिम्मेवार हुने वर्षा सोच्छिन्। फिल्म जतिसुकै राम्रो बने पनि दर्शक हलसम्म नआउँदा बर्सेनि आधा अर्ब लगानी डुबिरहेको छ। यो सबै कलाकारले आफूलाई सस्तो बनाउँदाको परिणाम भएको वर्षा सोच्छिन्। भन्छिन्, ‘कलाकारको डे टु डे लाइफ, अभिनय सबै सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा नै आउने भए पछि किन दर्शक उनीहरूको फिल्म हेर्न हलसम्म जाउन् त ? ’
कलाकारले आफ्नो भ्यालु घटाउन नहुने वर्षाको बुझाइ छ। उनी आफैं पनि आफ्नो भ्यालु घटाउन चाहन्न रे। भन्छिन्, ‘मलाई सस्तो बन्नु छैन।’ एउटा कलाकारले आफ्नो कलाको महŒव बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। चलचित्र क्षेत्रमा आफू घमण्डी भनेर चिनिए पनि पब्लिसिटी पाउन र युट्युबमा भाइरल बनेर नाम कमाउने इच्छा नभएको उनले बताइन्। भन्छिन्, ‘म मेरो कामबाट चिनिन चाहन्छु।’
सेलिब्रेटी भएपछि आफ्नो स्टाटस, लाइफ स्टाइल र आफूले गरेको कामको प्रभावलगायत धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफू नायिका भएकाले नायिका बन्न हरसम्भव प्रयास गरिराखेको उनले बताइन्। ‘क्यामेरामा फिट देखिन शरीरको वजन घटाउनेदेखि अभिनय क्षमता तिखार्न प्रयास गरिराखेकी छु’, उनले भनिन्। अहिले वर्षा हरेक दिन जिम जान्छिन्। आफू पर्दामा मोटो देखिने गरेको भन्दै पातलिने प्रक्रियामा छिन् उनी।
वर्षाले रजतपटमा पाँच वर्षअगाडि पाइला टेकेकी हुन्। स्कुलदेखि नै नाच्न मन पराउने उनी घरको कोठामा बस्दाबस्दै नेपाली, हिन्दी सिनेमाका गीतबाट हुबहु नृत्य सिक्थिन्। सानोमा स्कुलमा हुने विभिन्न नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिन उनी तम्सिन्थिन्।
कम बोल्ने र सजिलै घुलमिल हुन नसक्ने स्वभावले गर्दा उनका धेरै साथीहरू थिएनन्। घरका सबै सदस्यको पढ्नु पर्ने मान्यता थियो। अरू जे गरे पनि पढाइ राम्रो हुनुपर्ने भएकाले उनले प्लस टु म्यानेजमेन्टमा गरिन् भने ब्याचलर बैंकिङ इन्सोरेन्समा गरिन्। ब्याचलर पढाइकै क्रममा भएको एक वार्षिक कार्यक्रममा उनको नृत्य देखेरै उनलाई ‘नाइँ नभन्नु ल २’ मा डेब्यु गर्ने मौका दिइएको थियो।
पहिलो फिल्मको अभिनय गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘पहिलो पटक क्यामेरा फेस गर्दा साह्रै नर्भस भएँ।’ वर्षाको भागमा मात्र राखेर फिल्मको बाँकी सबै सुटिङ सकिसकेको थियो। जम्मा पाँच दिनको सुटिङ थियो। कुनै तयारी बिना नै अभिनय गर्न लगाइएकाले उनलाई निकै गाह्रो भएछ। भन्छिन्, ‘अब त अभिनय गर्न सक्छु जस्तो लाग्दा सुटिङ नै सकियो।’
पढाइ राम्रो गरी राखेकी वर्षालाई फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु भन्ने कुनै सोच थिएन। भाग्यले यो क्षेत्रमा ल्याएको उनी बताउँछिन्। पहिलो फिल्मले आफूलाई महŒव दिएर अगाडि बढाएकै कारण उनीप्रति दर्शकको कौतुहल र अपेक्षा पढेको थियो।
वर्षा फिल्मी परिवारबाट आएकी होइनन्। उनी भन्छिन्, ‘सुरुसुरुमा गाइड गर्ने मान्छे नहुँदा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नै बुद्धिमताले निर्णय गर्नु गाह्रो हुन्थ्यो।’ तर अहिले उनी समयसँगै फिल्म क्षेत्रसँग परिचित हुँदै गएको बताउँछिन्।
‘थोरै माया तिम्रो’मा प्रियंका र आयुस्मानको रोमान्स (भिडियो)
तनुश्रीमाथि ५० करोडको मुद्दा
कंगना बनिन् बलिउडकी महँगी अभिनेत्री